“အတွေးစလေးတွေ”: July 2012
သူကြီးသား ပေါက်ကြီး၏ စွန့်စားခန်းများ ( ၂ ) . . .
အပိုင်း ( ၁ ) မှ အဆက် . . .
ကျုပ်တို့ရွာကနေ မဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ရောက်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကားတစ်ဆင့်၊ ရထားတစ်ဆင့်စီးရတာကိုး။ ခရီးသည်တင်ကားဆိုတာကလည်း ဒီဘက်ခေတ်လို မှန်လုံကားကြီးတွေ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်တုန်း။ ချက်ပလက်ခေါင်းတိုလို့ အညာလိုခေါ်တဲ့ စစ်လက်ကျန်ကားကြီးတွေ။ ကားတိုက်မှုဖြစ်မှာကတော့ မပူလေနဲ့။ စိတ်ပေါက်မှ လိပ်လောက်ပြေးတဲ့ကားတွေဆိုတော့ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး သေသေချာချာ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုက်ရင်တောင် ခရီးသည်တွေ အထိုင်မပျက်လောက်ဘူး။ ကားတွေကလည်း စုတ်လိုက်ချာလိုက်တာ တစ်ချို့နေရာများဆိုရင် ပြုတ်ထွက်ကုန်မှာစိုးလို့ လျှော်နဲ့တောင် တုပ်ထားရသေးတာရယ်။ ကားလို့သာခေါ်ရတယ် တကျွီကျွီတအီအီနဲ့ အသံပေါင်းစုံမြည်နေတာမို့ ဆီမထိုးဘဲထားတဲ့ ဘကြီးသာဝရဲ့ ဒေါက်လှည်းအိုကြီးပေါ် ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့လို တောသားအတွက်ကတော့ ဇိမ်ပါပဲ။
ကားလမ်းတလျှောက် ကြုံသမျှအခက်အခဲတွေကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူးလေ။ ဒီကြားထဲမှာ ရထားစီးရတာကလည်း တယ်မနိပ်လှဘူး။ တဂျုံးဂျုံး၊ တဂျောင်းဂျောင်းနဲ့ ရမ်းချက်ခါချက်ကတော့ ဘကြီးဖြိုးရဲ့ ဟာလာဆန်စက်ဇကာပေါ်တက်ထိုင်နေရသလား မှတ်ရတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကြမ်းပိုးကလည်း ကိုက်ပါဘိ။ လူတွေကလည်း ငါးပိသိပ်၊ ငါးချဉ်သိပ်တင်ထားသေးတာရယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ လူတွေဒီလောက်များမှန်း သိရတော့တာ။ တကတည်း ရထားပေါ်မှာ လူတွေသီးနေသလားလို့တောင် ထင်စရာပဲ။ အခင်းကြီး၊ အခင်းလေးသွားဖို့တောင် နေရာကမထရဲဘူး။ ထလိုက်တာနဲ့ ဘုံပျောက်ဖို့များတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သူများကို ကျော်ခွသွားပြန်ရင်လည်း အဆဲ၊ အဆိုခံရဦးမှာ သေချာတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အရေးထဲအရာပေါ်သလို ပါတော်မူချင်တဲ့ ပြဿနာက တက်ပြန်ရော။ မတက်ဘဲနေရိုးလား။ မနေ့ညနေက ကိုရင်ခွေးနီတို့တစ်အုပ် ကျုပ်ကိုဂုဏ်ပြုလွှတ်လိုက်တဲ့ ထန်းရည်တစ်မြူက အစွမ်းပြသကိုး။ သည်လူတွေကတော့ သည်လိုချည်းပါပဲ။ ရွာထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်မယ်မကြံနဲ့။ ရမယ်ရှာပြီး ထန်းတောထဲရောက်သွားတာချည်း။ ယာထဲကိုင်းထဲက ပြန်လာရင်လည်း ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီး ထန်းတောထဲဝင်တာပဲ။ အလုပ်မရှိပြန်ရင်လည်း ပျင်းလို့ဆိုပြီး ထန်းတောထဲဝင်ပြန်တာပဲ။ အခုလည်း ကျုပ်ရန်ကုန်သွားရမှာကို အကြောင်းပြပြီး သောက်ပွဲကျင်းကြတာကိုး။ ပြောရရင်တော့ ပေါက်ကြီးတို့ ရန်ကုန်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာကတည်းက တစ်ရွာလုံးမှာ ကျုပ်နဲ့အောင်ဘုက မင်းသားကြီးတွေကို ဖြစ်လို့။ ဟိုအိမ်က ထမင်းစားဖိတ်ရတာနဲ့၊ သည်အိမ်က ရေနွေးကြမ်းဝိုင်း ဖိတ်ရတာနဲ့၊ မျက်နှာပွင့်ချက်ကတော့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်မယုံလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆိတ်ကြည့်နေရတဲ့ အဖြစ်။
အနှီညနေက ကိုရင်ခွေးနီရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ ထန်းတောထဲရောက်သွားတော့ ထန်းပိုင်ရှင် ဘကြီးသာမွှေးက ကျုပ်ကိုစကားတွေ ဘာတွေ အရေးတယူလုပ်ပြောလို့။ သည်အဘိုးကြီးက တော်ရုံလူကို သိပ်စာရင်းသွင်းတာမဟုတ်ဘူးရယ်။ သူ စိတ်ကြီးဝင်မယ်ဆိုလည်း ၀င်ချင်စရာ။ သူ့သမီး မိသင်းကြိုင်က သည်နားရွာနီးချုပ်စပ်မှာတော့ နံမည်ကြီးအလှမယ်ကိုး။ ခမျာမှာ ငွေကြေးကလည်း သိပ်မပြည့်စုံရှာတဲ့အပြင်၊ မိစုံ၊ ဖစုံလည်းမရှိရှာလို့ ရွာ့ကွမ်းတောင်ကိုင် ဖြစ်ခွင့်မရရှာပေမယ့် ကျုပ်တို့နားပတ်ဝန်းကျင်က ကာလသားတွေကတော့ “ ကျုပ်တို့နယ်တစ်နယ်လုံး၊ သည်သူငယ်မှ အလှဆုံးဖြစ်ပေမယ် ”လို့ တညီတညွှတ်ထဲ သတ်မှတ်ထားကြတာရယ်။ ထားပါ။ ကျုပ်ကလည်း သူ့ကို သိပ်ကြိုက်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အဖေကြီးက ဖော်ဖော်ရွေရွေလုပ်ပြနေတော့လည်း ရေလိုက်ငါးလိုက်လေး နေပေးရတာပ။ အံမယ် ကျုပ်ထန်းရည်နဲ့မြည်းဖို့ ဆူပေ့၊ ဖြိုးပေ့ဆိုတဲ့ လယ်ကြွယ်ကြီးနှစ်ကောင်ကို မိသင်းကြိုင်ကိုယ်တိုင်ကြော်ပြီး လာချပေးသေးတာရယ်။ ကိုရင်ခွေးနီတို့တစ်သိုက်ကတော့ ကျုပ်ကို အထင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးရွဲကြီးတွေနဲ့ ၀ိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့။ သည်လူတွေ မျက်လုံးရွဲဆို တစ်ယောက်စီရဲ့ဗိုက်ထဲမှာလည်း ထန်းရည်တစ်မြူစီလောက်က ၀င်ပြီးပြီကိုး။ ကျုပ်ကလည်း ပေါက်ကြီးပဲ။ ပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးပြီး၊ ဖိန့်ဖိန့်ကြီး ထိုင်နေလိုက်တာပေါ့။ ကျုပ်နဲ့တစ်ဝိုင်းတည်းထိုင်နေတဲ့ကာလသားတွေစိတ်ထဲမှာ စာမသင်ဖြစ်ခဲ့တာ နာလိုက်လေခြင်းလို့များ တွေးနေကြမလားမပြောတတ်ဘူး။
အနှီညနေက ထန်းရည်လေးတစ်မြူနဲ့ လယ်ကြွက်ကြော် ခပ်ဆူဆူကို အရသာရှိရှိစားပြီး ဆက်ရက်မင်းစည်းစိမ်ခံခဲ့သမျှ ကားပေါ်မှာ ပြဿနာမပေါ်ဘဲ ရထားပေါ်ကျမှ ခွကျပါလေရော။ ဗိုက်ထဲကနေ တဂွီဂွီနဲ့ ရစ်ပြီးနာချက်ကတော့ တကတည်း ဝေသာလီပြည်ကိုဝင်စီးတဲ့ ဘီလူးတွေ ကျုပ်ဗိုက်ထဲရောက်နေသလား မှတ်ရတယ်။ ကျုပ်လည်း ခံနိုင်သလောက်တော့ တောင့်ခံပါသေးတယ်။ ခက်တာက သောက်ရထားက တဂျိုင်းဂျိုင်း၊ တဂျုံးဂျုံးခုန်နေတာကိုး။ အတွင်းက ပစ္စည်းတွေက အပြင်ထွက်ဖို့ တာစူနေရတဲ့အထဲမှာ အပြင်ကရထားကပါ ခုန်နေတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ကိုယ့်ဆရာ။ ရထားတစ်ချက်ခုန်တိုင်း သည်တစ်ချီတော့ သွားပဟဲ့ဆိုပြီး မျက်လုံးတွေကို ပြာခနဲ၊ ပြာခနဲပဲ။ အန္တရာယ်လွယ်မထားနဲ့လို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဒါကြောင့်ပဲ မှာခဲ့ဟန်တူတယ်။ ကျုပ်အံကြီးကြိတ်ပြီး မျက်နှာမှာ ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေ ဆီးကင်းလောက်သီးနေတာမြင်တော့ ကျုပ်မျက်နှာကို တစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြည့်နေတဲ့ အောင်ဘုက ကိုရင်ပေါက် ဘာဖြစ်တာတုန်းလို့ မေးသေးတာရယ်။ ကျုပ်ခမျာ သူ့မေးတာကို ပြန်ဖြေဖို့နေနေသာသာ။ အထဲက ပစ္စည်းတွေအပြင်မထွက်ဖို့အရေး ဇွဲခတ်ပြီး အံခဲထားရပါရောလား။
ခက်တာက ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာ အောင့်ထားလို့ရတာမျိုးမှ မဟုတ်ဘဲ။ အောင့်လေ၊ ထွက်ချင်လေဆိုတာမျိုး။ ကြာတော့ ကျုပ်လည်း ကိုင်းဘုံပျောက်ချင်လည်း ပျောက်ဆိုပြီး ဟိုလူကျော်၊ သည်လူခွနဲ့ အိမ်သာထဲကို ၀ရုန်းသုန်းကား ၀င်ရပါလေရော။ ကျုပ်ကလည်း မျက်လုံးတွေပြာနေတော့ ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲ မြင်တော့တာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ဘယ်သူ့တက်နင်းလို့ ဘယ်သူ့ကိုခွခဲ့မိတယ်ဆိုတာတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ တော်သေးတာပေါ့။ ကျုပ်ဖတ်ဖူးတဲ့ ဘုတ်အုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဇာတ်လိုက်က ရထားနဲ့ခရီးသွားတဲ့အခန်း ပါပေလို့။ အနှီစာအုပ်သာမဖတ်ခဲ့ဖူးရင် ရထားပေါ်မှာ ယိုအိမ်မရှိဘူးထင်ပြီး ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မယ် မသိဘူး။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကျုပ်တို့ရွာမှာ အိမ်သာရယ်လို့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ရှိတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ကျုပ်အဖေ သူကြီးအိမ်မှာတောင် အိမ်သာမရှိဘူးဆိုတော့ တွေးသာကြည့်ပေတော့။ ညနေနေညိုရင် ရွာတောင်ဘက်က ကွင်းကြီးထဲကို တုတ်ကလေးတစ်ချောင်းစီကိုင်ပြီး တောထိုင်ထွက်ကြတာကိုက ကျုပ်တို့ဓလေ့။ ခြုံခေါင်းကလေးထဲမှာ လေကလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ တောထိုင်ပြီး အစာဟောင်းစွန့်ရတဲ့အရသာဆိုတာ တကယ်နိပ်တာကလား။ ကျုပ်ကတော့ ဘကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လူဖြစ်လာတဲ့အကောင်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးသုံးကုဋီတွေဘာတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တာကိုး။ ပြောရဦးမယ် ဘုန်းကြီးကျတော့ လူတွေလို တွေ့ကရာတုတ်နဲ့ မစင်သုတ်တာမဟုတ်ဘူးရယ်။ တစ်ထွာကျော်ကျော်လောက် ခပ်ပြားပြား ၀ါးခြမ်းကလေးတွေကို အချောသတ်ထားတာနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ။ ကျုပ်တို့ဆီမှာတော့ အနှီတုတ်တံကို “ ကနုတံ ” လို့ ခေါ်တာပါပဲ။ သုတ်ရတာတော့ အဆင်ပြေပါရဲ့။ သုတ်ပြီးရင် ကုဋီထောင့်က ပုန်းတစ်လုံးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ရုံပဲ။ သုတ်စရာ ကနုတံတွေကုန်သွားပြီဆိုမှ ဒုက္ခနဲ့ တွေ့ရော။ တွေ့ဆို သုတ်ပြီးသား ကနုတံတွေကို ပြန်ဆေးရတာကိုး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလုပ်ရတာ အဲဒီတစ်ချက်ကတော့ တယ်မနိပ်ဘူး ကိုယ့်ဆရာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားများ ဇိမ်ချည်းပဲလို့ ထင်မနေနဲ့ဦး။
ကျုပ်ယိုအိမ်ထဲလည်းရောက်လို့ တံခါးပိတ်မယ်လည်းကြံရော တံခါးက “ဂျလက်” မပါဘူးဗျား။ ကျုပ်တို့တောမှာ ခြုံခေါင်းလေးထွင်ပြီး အခင်းကြီးသွားတာ မရှက်ပေမယ့် ဒီလိုရထားကြီးပေါ်မှာ တံခါးပေါက်ကြီးဖွင့်ပြီး ကိစ္စပြီးရမှာတော့ အတော်ရှက်ဖို့ကောင်းမယ့်အရေးအခင်း။ ဒါနဲ့ အိမ်သာပေါက်ပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ တံခါးလက်ကိုင်ကို အတင်းဆွဲထားရပါလေရော။ အနှီလို ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ကိစ္စရှင်းနေရတဲ့ကြားမှာ သောက်ရထားက တစ်ချက်တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်ရင် ကျုပ်မှာ အိမ်သာပေါက်ထဲချော်မကျအောင် အတော်ထိန်းထားရသေးတာ။ အနှီလောက် ထိန်းထားတဲ့ကြားက သတိတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တာ တစ်ချီမှာတော့ အိမ်သာပေါ်ကနေ ချော်ကျပါလေရော။ အကျတော်လို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ် ပြန်မသုတ်မိပေမယ့် အကျမကောင်းတော့ အိမ်သာနံရံနဲ့ နဖူးကို ကပ္ပိမိပါရောလား။ အိမ်သာထဲကထွက်လာပြီး ကျုပ်နေရာကျုပ်ပြန်လာတော့ ဘုံပျောက်ရောမှတ်နေတာ။ ကျုပ်လူအောင်ဘုက ဆောင့်ကြောင့်ကြီးထိုင်၊ တံတောင်ဆစ်ကြီးနှစ်ဖက်ကားထားပြီး နှစ်ယောက်စာနေရာကို တစ်ယောက်တည်း ဦးထားပေးသဗျား။ ခမျာမှာလည်း ဘယ်လောက်တောင် မာန်တင်းထားရတယ်မသိဘူး။ မေးကြောကြီးတွေတောင် ထောင်ထနေတဲ့အထိ။
ကျုပ်လည်း အလာတုန်းကလိုပဲ ကျော်ကျော်ခွခွနဲ့ အောင်ဘုဘေးလည်းရောက်ရော သကောင့်သား အတော်မြူးသွားဟန်တူရဲ့။ တကတည်း ကျုပ်မျက်နှာကို မော့ကြည့်တဲ့သင်းမျက်နှာဟာ နို့ခွဲထားတဲ့ နွားပေါက်စ သူ့အမေနို့စို့ရတော့မှာမို့ မြူးသွားတဲ့အကြည့်မျိုး။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျုပ်နဖူးမှာ အာလူးသီးကြီး ထနေတာကို အောင်ဘုမြင်သွားတာကိုး။ အနှီတော့ “ကိုရင်ပေါက် နဖူးကြီးက ဘာဖြစ်တာတုန်းဗျ ”လုပ်လာရော။ ကျုပ်လည်း “ ဟာ မပြောချင်ပါဘူးကွာ…ငါ့မှာ ဟိုဒေါင့်ကအခန်းလေးထဲဝင်သွားမိပါ့…အထဲက ငနဲတစ်ကောင်နဲ့ ဆော်လိုက်ရတာကွာ…ဒီငနဲကလည်း အတော်သန်တယ်မောင်…ငါလိုဗလတောင် အတော်တွယ်ယူရတယ်…အနှီငနဲလည်းမှောက်ရော ငါလည်းနဖူးမှာ အာလူးသီးထတာပဲဟေ့…အနှီအခန်းဘက်များ ယောင်လို့မသွားလေနဲ့နော်…မြို့သားများ တယ်သွေးကြီးတယ် ” လို့ ခပ်ဖိန့်ဖိန့်လေး ပြောလိုက်ရတာပါ့။ ဒါမှ သည်ကျေးတောသား ကျုပ်ကို အထင်ကြီးမှာကိုး။ အောင်မယ် သည်တစ်ခါ ကျုပ်မျက်နှာကို အောင်ဘုကြည့်တဲ့အကြည့်က တကယ့်ကို တလေးတစားကြီး။ ကျုပ်က သူကြီးသားပဲဗျ။ မြို့သားကိုသာ နည်းနည်းရှိန်ချင်တာ တောသားချင်း လူပေါ်လူဇော်လုပ်နည်းလောက်တော့ ပေါက်ကြီးတို့က နောကျေပြီးသား။
ရထားပေါ်မှာ ကြုံရတဲ့ဒုက္ခ၊ သုက္ခတွေကို စာဖွဲ့ပြရရင်လည်း တောသားဖြစ်ပြီး အရေပါးတယ် ထင်ကြဦးမယ်။ တတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ ကျုပ်တို့ တောသားလဲလူပဲဟာ။ တကတည်း လူတွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နည်းနည်းမှကို အထိမခံတာ။ ရထားဆောင့်လို့များ ကိုယ့်ဘေးကလူကို နည်းနည်းထိမိမယ်မကြံနဲ့။ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်း အသံပေးပြီး ချိုကြည့်ကြည့်ခံရသေးတာရယ်။ ပြောရရင်တော့ ဘကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျောင်းခွေးတွေကို အစာကျွေးတဲ့အခါ တစ်ကောင်ကိုတစ်ကောင် စားမာန်ခုတ်ကြသလိုပေါ့။ ပထမတော့ ငါလိုသူကြီးသားနဲ့ အသားချင်းထိမိတာကို သင်းတို့က နာအံ့ထင်ရသလားဆိုပြီး စိတ်တိုသပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါက နှစ်ခါကျတော့လည်း စိတ်ကမတိုအားတော့ဘူးဗျို့။ လူနဲ့လူချင်း အဖြစ်သည်းနေတာကို ကြည့်ရင်း ပြုံးနေမိတော့တာပဲ။
ကျုပ်ကသာ စာတတ်ပေတတ်မို့လို့ ဘာကိုဖြစ်ဖြစ် တွေးတွေးဆဆလုပ်နိုင်တာ။ ကျုပ်ဘေးက အောင်ဘုတစ်ယောက်ကတော့ ဟိုလူ့ထိမိလည်း ချိုကြည့်ကြည့်ခံရ၊ သည်လူ့ထိမိရင်လည်း ခွာကြည့်ကြည့်ခံရနဲ့ဆိုတော့ ခမျာမှာ ဒူးနှစ်လုံးထောင်၊ ထောင်ထားတဲ့ဒူးနှစ်လုံးကို လက်နဲ့ပိုက်ပြီး ကျောက်ရုပ်ကြီးချထားသလို မလှုပ်မရှက် ထိုင်နေရရှာပါရောလား။ တကယ်တော့
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက် မြို့တက်လာတယ်သာပြောရတယ်။ အနှီ အောင်ဘုဆိုတဲ့ ငနဲသားက စာရင်းတောင်ဝင်တာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ အသက်ကလည်း ရှိလှမှ ၁၂နှစ် ၁၃နှစ်ပေါ့။ စာမတတ်၊ ပေမတတ်။ သြကာသတောင် အမြီးအမောက်တည့်အောင် ဆိုနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရွာကထွက်ကတည်းက ကျုပ်အင်္ကျီစကို မလွှတ်တမ်းဆွဲထားတော့တာပဲ။ သူများတကာမြင်ရင် သားအဖနှစ်ယောက်လို့တောင် ထင်ချင်စရာ။ အူချက်၊ အချက်ကတော့ ပြောမနေနဲ့။ ဘာတစ်ခုမှကို မြင်ဖူး၊ ကြားဖူးတယ် မရှိဘူး။ ရွာကထွက်ကတည်းက မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ ပါးစပ်ကဟောင်းလောင်း။ လက်ညှိုးတစ်ထိုးထိုးနဲ့ တောင်မေးမြောက်မေးလုပ်လွန်းလို့ ကျုပ်တော်တော်စိတ်ကုန်လှပြီ။ သူလုပ်ပုံနဲ့တင် ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကို မြို့သားတွေ အထင်သေးတော့မှာပဲ။
ဟုတ်သလေ။ မြို့သားဆိုတာမျိုးက ကျုပ်တို့လို တောသားတွေကို အထင်အမြင်က လွှတ်သေးချင်ကြတာကလား။ ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးသားမပြောနဲ့ စပါးလာဝယ်တဲ့ တောမြို့ကလေးက ပွဲစားလို လူမျိုးတောင်မှ ကျုပ်တို့ကို သိပ်အထင်ကြီးတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ပြောရဦးမယ်။ ပွဲစားဆိုလို့။ အဲဒီပွဲစားကလည်း ကျုပ်ရဲ့ရန်ကုန်ခရီးမှာ ကျေးဇူးရှင်စာရင်းဝင်တစ်ယောက်ပေါ့။ အခုကျုပ်ဝတ်လာတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ ဘောင်းဘီရှည်က သူ့လက်ကျတွေလေ။ ဘောင်းဘီက အောက်နားက ခပ်ပွပွ။ ပွတာမှ အတော့်ကိုပွတာ။ လမ်းများလျှောက်လိုက်ရင် မြခြေကျင်းမငွေမြိုင် ထဘီအနားခတ်ကသလို ၀ဲခနဲ၊ ၀ဲခနဲနေတာပဲ။ သူရို့မြို့သားတွေက အဲဒီလိုဝတ်ကြဆိုပဲ။ အပေါ်ပိုင်းကျတော့လည်း ကျပ်လိုက်သမှ အသက်ရှူလို့တောင် မ၀ချင်ဘူး။ ဘယ်ရမလဲ ကျုပ်နည်းကျုပ်ဟန်နဲ့ ဘောင်းဘီအထက်နားကို ဓားနဲ့ခွဲထားလိုက်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ကျုပ်အဖေသူကြီးရဲ့ ကျည်ဆံခါးပတ်ကြီး ကောက်ပတ်ထားလိုက်တော့ ဟန်ကိုကျလို့။ ခွဲထားတဲ့အရာလည်း လူမမြင်တော့ဘူး။ ဘောင်းဘီကျွတ်မှာလည်း ပူစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ အင်္ကျီကလည်း ကျပ်လိုက်သမှ ကြယ်သီးတောင် အစုံအစေ့တပ်လို့မရဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ ကြယ်သီးကပြုတ်နေသေးလို့ ရှောက်ဆူးနဲ့ထိုးပြီးတွယ်ထားရတယ်။ မြို့သားတွေစီးတယ်ဆိုတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်မျိုးတော့ ရွာမှာမရှိလို့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက ကျုပ်အဖေ အမြတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့ စစ်ဖိနပ်ပဲ စီးလာခဲ့ရတယ်။ ကျုပ်ပုံစံ အဆင်ပြေမပြေတော့ မသိဘူး။ ရွာတောင်ပိုင်းက ဗွေးတုတ်ကတော့ “ ကိုရင်ပေါက်က ဒီလိုဝတ်ထားတော့လည်း အခန့်သားတော့ ” လို့ အားပါးတရ ကောင်းချီးပေးတာပဲ။
ကျုပ်ကသာ အနှီလိုမျိုး ရုပါကို မောင်းတင်ထားတာ။ အောင်ဘုဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ တောပုံကိုမပျောက်ဘူး။ ဘယ်ပျောက်လိမ့်မတုန်းလေ။ ၀တ်ထားတာက ဖျင်ကြမ်းတိုက်ပုံနဲ့၊ ပုဆိုးက ဒူးခေါင်းတိုက်နဲ့။ ဒီကြားထဲမှာ ဘကြီးဘုန်းကြီးအကျ ဘုန်းကြီးစီးဖိနပ်ကြီးက စွပ်ထားလိုက်ချေသေးတယ်။ ရုပ်ကလည်း ကျောက်ခေတ်ကရုပ်မျိုးဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ တောသားဆိုတာ စာဆွဲထားစရာမလိုအောင် ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပါရော့လား။ ရွာကမထွက်ခင်တုန်းက သူ့ကိုဘောင်းဘီလေးဘာလေးဝတ်ဖို့ ကျုပ်ကတိုက်တွန်းပါသေးတယ်။ ကိုယ့်လူက “ ကိုရင်ပေါက်ရယ် ကျုပ်ကဘောင်းဘီနဲ့မတည့်ဘူးဗျ။ အဲဒါကြီးတွေဝတ်ရင် ယားတယ် ” လို့ စောဒကတက်တာနဲ့ပဲ စိတ်ချမ်းသာတာ ၀တ်ပါစေလို့ လွှတ်ထားလိုက်ရတယ်။ ပုဆိုးကိုလည်း မြို့သားတွေလို ခွေးချေးတရွတ်တိုက်ဝတ်ပါလို့ပြောတာလည်း မရပြန်ဘူး။ “ ကျုပ်သာ အဲဒီလိုဝတ်လိုက်ရင် ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းမပြည့်ခင် ကျွတ်ကျမှာ သေချာသယ် ကိုရင်ပေါက် ” လို့ တွင်တွင်ပြောတာနဲ့တင် ဒူးတင်ပေါင်တင်ကြီးကို အသာထိုင်ကြည့်နေလိုက်ရတယ်။ ဒူးနဲ့ပေါင်ကို ဖော်ထားတာ အမြင်ဆိုးပေမယ့် ရှည်ရှည်ဝတ်မိလို့ ကျွတ်ကျမှဖြင့် အမြင်မတော်တာတွေဖြစ်ကုန်ရင် ခက်ကုန်ရချေရဲ့။
ခပ်တိုတိုချုပ်ရရင် ကျုပ်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက် မဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ကားတစ်တန်၊ ရထားတစ်တန်နဲ့ မချိမဆန့် ရောက်ကြလေသတည်းပေါ့။
အပိုင်း ( ၃ ) ဆက်ပါဦးမယ် . . .
Posted by Han Kyi at 4:07:00 am 31 comments:
အမျိုးအစား : ၀ထ္ထု
သူကြီးသား ပေါက်ကြီး၏ စွန့်စားခန်းများ ( ၂ ) . . ....